Kutheni iSpain imisa ithuba elihle lokhenketho lwehlabathi?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Tourism » Kutheni iSpain imisa ithuba elihle lokhenketho lwehlabathi?
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iintlanganiso • iindaba • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Oktobha 15, 2021
Ukhenketho lweHlabathi lulungiselela ikamva elihle kunye ne-COVID ephantsi kolawulo.
Le yimpendulo yabaninzi kushishino lokuhamba nokhenketho lwehlabathi.
Ukwenza uKhenketho lweHlabathi lusebenze kwakhona kuthatha iinkokheli nabantu abanombono. Ikwathatha abantu abazimiseleyo kwaye banako ukwenza.
Ukhenketho lweHlabathi ludinga uncedo olukhawulezileyo kwaye i-UNWTO iye yasilela ekunikezeleni ngobunkokheli, ngamanye amaxesha boyisa inkqubela phambili ngemidlalo yeqhinga kunye nezopolitiko.
I-Saudi Arabia yathatha indima yenkokeli yehlabathi kunye namazwe aphambili angamalungu e-UNWTO.
UMphathiswa weSaudi Arabia wezokhenketho umeme i-1000 yeengqondo eziqaqambileyo kukhenketho ukuya kwixesha elizayo Utyalomali lweNkomfa yaBantu eRiyadh.
Ngokwelungu le Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi, Umzuzu omkhulu woKhenketho lweHlabathi uyenziwa ebukumkanini baseSaudi Arabia.
Ezokhenketho bezingena kwimiceli mngeni engenakwenzeka ukusukela ekuqaleni kuka-2020 ngenxa yobhubhane we-COVID-19.
E-Saudi Arabia, Umphathiswa Wezokhenketho u-Ahmed Al-Khateeb ubonakalise ubuso hayi kwilizwe lakhe kuphela. Ubeyinkwenkwezi ekhanyayo yethemba ukusuka kwiCaribbean ukuya e-Afrika.
Ubukumkani babele amawaka ezigidi zeedola kungekuphela ukuphuhlisa amandla abo okhenketho kodwa nokunceda ilizwe liphela ukugcina eli candelo lijikeleza.
The Umbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) Ityhubela ingxaki yobunkokeli kunye noNobhala-Jikelele wayo edlala umdlalo ophindwe kabini.
I-Saudi Arabia yayikho ukunceda ngokwasemthethweni nangemali. Ngo-Meyi walo nyaka, i-UNWTO ivule iziko lengingqi eRiyadh. Kwakhona WTTCUmbutho osekwe e-UK umele uninzi lwabachaphazelekayo babucala kukhenketho lwehlabathi kunye nomzi mveliso wokhenketho luvule iziko lommandla eRiyadh.
Ukuqonda imeko enzima i-UNWTO ibikukungonelisi kwenkxaso evela eSpain iyinyani, iSaudi Arabia ibonakalise umdla wayo wokuzisa lo mzimba wehlabathi usuka eMadrid uye eRiyadh.
Ukuhamba okunjalo kuya kufuna ukuvunywa ngamalungu e-UNWTO kwi-UNWTO General Assembly ezayo eMorocco. Iingcali ezikufutshane nomcimbi ziqikelele ukuba iivoti eziyimfuneko kuthatho olo sele zikhuselekile, nangona uBukumkani bungazange bucele ngokusemthethweni.
Amarhe okuhamba enze iSpain kunye namanye amahlakani e-EU ngaphezulu kokufuna ukwazi. Ukudityaniswa kozakuzo ngasemva kwesigameko bekugcwele ngokupheleleyo, ngokutsho kokuthenjwa eTurboNews kwimithombo.
Umthunywa we-UNWTO ovela kwilizwe le-EU exhomekeke kakhulu kukhenketho uxelelwe eTurboNews, wayenegunya lokuvota ngendlela athanda ngayo, kwaye wayeya kuvota intshukumo ukuba wayekuvota.
Inkulumbuso yaseSpain yabiza iNkosana yaseSaudi malunga nenyanga edlulileyo. Kutyholwa isizathu sokuba umnxeba ubeyinjongo kaRiyadh ngokuhamba okunokwenzeka kwikomkhulu le-UNWTO.
Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo UNobhala-Jikelele we-UN António Guterres wazibandakanya, kwaye iprojekthi yamiswa ngokuxhomekeke kwisivumelwano esiza kugqitywa phakathi koMphathiswa Wezokhenketho wase-Saudi nomlingane wakhe, Abaphathiswa bezoKhenketho baseSpain.
Umntu oqhelene nale ngxoxo phakathi kweSaudi Arabia neSpain uxelele eTurboNews: “Iingxoxo phakathi kweSpain neSaudi Arabia ziyaqhubeka kodwa icala laseSaudi liyadinwa sisantya senkqubela phambili. Ukuphela kwe-FII ukuphela kuka-Okthobha kuya kuba ngumzuzu omkhulu kukhenketho, kunye nabaphathiswa abaninzi kunye neenkokheli zeshishini eRiyadh. Masithembe ukuba uMaroto ukhona. ”
Umhlonishwa uReyes Maroto nguMphathiswa Wezokhenketho eSpain.
Ingcali eyaziwayo nehlonitshwayo eYurophu kufutshane ne-UNWTO, engafunanga ukubizwa ngegama eTurboNews:
"Ukuba iSpain icinga ukulibaziseka kwamaqhinga kuthetha ukuba bathintela iSaudi Arabia ekuqhubekeni nokwenza iphulo lokuhambisa i-UNWTO iye eRiyadh, emva koko baphosakele. Kusekho ixesha lokutyhala. Okwangoku, uMaroto use-Itali, kumnyhadala wezorhwebo, kwaye kugxilwe kuye ayikokhenketho. "
Omnye umthombo uxelele eTurboNews"Kubonakala ngathi iSpain iyazibophelela kwizinto eziphambili I-Saudi Arabia icele ukuthintela le ntshukumo yeNdlunkulu ukuba icelwe."
Nangona kunjalo, ikwabonakala ngathi isantya ekugqityweni kokuzibophelela inokuba ngumcimbi odida iSaudis.
eTurboNews ifikelele kubo bobabini iSpanish kunye noMphathiswa weSaudi wezokhenketho. Akukho enye ingcaciso efunyenweyo.
ISeychelles izisa ukukhanya kwelanga kunye namaphupha okuPhuma ngolonwabo...
Iinqwelomoya ezintsha ezisuka eBangkok ukuya ePhnom Penh eBangkok...
ISeychelles ayililo ilizwe elixhalabileyo ngoku eOstreliya...